Ankoatra Ny Lohatenin’ny Mondialy: Ranomaso ao Brezila, Etona Mandatsa-dranomaso ao Bahrain ary Voina any Qatar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2014 15:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Swahili, Aymara, বাংলা, македонски, عربي, English
Zatovovavy manao fihetsiketseha-panoherana samirery manohitra ny FIFA eo anoloan'ny kianjaben'i Maracana tamin'ny 22 jona 2014 rehefa vita ny lalao nifanandrinan'i Belzika tamin'i Rosia tao amin'ny vondrona nisy an-dry zareo, na dia teo aza ny hamaroan'ny mpitandro ny filaminanna voatendry hanakana karazam-pihetsiketsehana tahaka itony izay manohitra ny mondialy 2014. Sarin'i Marcelo Fonseca. Copyright Demotix.
Nivoaka voalohany tao amin'ny Pen American Center ity lahatsoratra ity ary nahazoana alalana ny namoahana azy indray.
Tahaka ahy, mety ho nanongo tena ianao ijerena raha nanonofy taorian'ny nijerena ny fahafaham-barakan'i Brezila resin'i Alemaina tamin'ny 7-1 nandritra ny atsasa-pamaranana tamin'ny fiadiana ny amboara erantany. Saingy nitranga izany. Naneho ny firaisam-pony ny blaogera avy ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, izay ahitana Bahrainita mpisera Twitter iray, wryly, nanamarika fa “tamin'ny fomba manafintohina” no namelan'ny ekipa ilay “entona mandatsa-dranomaso”. Raha manoratra izany izy dia manondro ankolaka ny fampiasan'ny governemantan'i Bahrain ny entona mandatsa-dranomaso vita breziliana amin'ny fomba maherisetra hanakanana ny hetsi-panoherana (fampitandremana, miaty zavatra mampihoron-koditra ny ao ambadiky ny rohy)
Farafahakeliny 20 tapitrisa dolara no horaisin'i Brezila tamin'ny nanaovany ny atsasa-dalana mankany amin'ny famaranana tamin'ity mondialy ity, saingy mbola mety hahazo 2 tapitrisa dolara fanampiny izy raha mandresy an'i Holandy, resin'i Arzantina, amin'ny fiadian-toerana fahatelo. Mety ilaina tokoa io vola io hanaovana fiovana ao amin'ny federasionan'ny baolina fandaka ao an-toerana.
Mitohy ny hetsi-panoherana ao amin'ny firenena saingy tsy mitovy tamin'ny talohan'ny fifaninanana. Nisy mpanao fihetsiketsehana 300 tao an-tanànan'i Sao Paulo nivoaka nitaky ny famotsorana ireo mpanao fihetsiketsehana teo aloha, fa novalian'ny polisy tamin'ny fisamborana enina fanampiny. Tsy hahare momba izay baile funk (dihy funk) ny ankamaroan'ny manohana mandeha any Brezila satria norarana izany noho ny lazany any amin'ny favelas sy ahenoana resaka volon-koditra any ambadimbadika any, ary manasongadina ny anjomaran'ny polisy sy ny tifi-basy.
Mandritra izany fotoana izany ny mpanohana Argentina, afa-mifaly satria afa-manararaotra mijery ny ekipany mifanandrina amin'i Alemaina amin'ny famaranana ary i Lionel Messi, iray amin'ny milalao tsara indrindra hatramin'izay dia handray sy hilalao hiaraka amin'ilay mpambabo fo Ezekiel Lavezzi eo ankilany any amin'ny fanafihana. nahazo mpankasitraka maro kokoa i Lavezzi rehefa nanala ny akanjony nihorakora-pandresena.
Eo amin'ny resaka fanavakavaham-bolonkoditra, izay lazaina ho mihoatra no tsy ampy. Nahitana fisarahan-kevitra tao amin'ny fitantanana ankapoben'ny FIFA amin'ny fomba hamaizana izay manavakava-bolonkoditra mandritra ny fifaninanana. Tsy nanaiky ny hampihatra ny ny fitsipi-pifehezana ao amin'ny task force FIFA ny hanasazy ny federasionam-pirenena noho ny hiaka fanavakavaham-bolonkoditra sy fankahalana pelaka ataon'ny mpanohana satria tsy mikendry olona iray manokana izy ireo fa ny ekipa manontolo.
Efa ahitana olana sahady ny fikarakarana ny Mondialy 2022 any Qatar noho ny fisian'ny tatitra fa maro mahatratra 400 ny Nepaley ary 700 ny Indiana mpiasan'ny fanorenana maty noho ny hafanana afa-manakaiky ny 122 degre Fahrenheit (50 degre Celsius).
Na izany aza, profesora amin'ny fanoratan-gazety iray ao amin'ny firenena no mandresy lahatra fa tokony mbola tontosaina ihany ny fifaninanana satria ahafahana mampisy fanerena tsy mitsahatra amin'i Qatar hanatsarana ny resaka zon'olombelona any an-toerana izany. Izy ihany koa dia mpiara-manoratra amin'ny fanadihadiana mivelatra indrindra momba ny fihetsika ara-tsosialy manoloana ny media any Afovoany Atsinanana, izay azo vakiana ato amin'ny habaka mahafinaritra ity. Notohan'ny Qatar Foundation ny fanadihadiany , ilay fikambanana izay manokana an'i FC Barcelona, misy an'i Lionel Messi. Io fikambanana mpanao asa-soa io (foundation) dia tohanan'ny governemantan'i Qatar amin'ny ampahany. Mbola manaraka ve? Aoka ianao ho mpitsara.
Miresaka matetika ny fitiavan-dry zareo lalao baolina fandaka misosasosa tsara ny manampahalalana eo amin'ny resaka fanatanjahantena. Handrisika amin'ny fahalalahan-kevitra mivoaka izahay any amin'ny famaranana (efa vita). Aleo ny ekipa tsara sy mahery no handresy.
Miampy ny tatitr'i Cassandra da Costa ny lahatsoratra.